Jawar Mohammed oo ka jawaabay hanjaabadda Abiy Axmed iyo xiisad ka taagan Itoobiya - Jigjiga Online
HomeWararka MaantaJawar Mohammed oo ka jawaabay hanjaabadda Abiy Axmed iyo xiisad ka taagan Itoobiya
Addis Ababa (JO) – Jawar Mohammed, oo ah nin u dhaqaaqa arrimaha qowmiyadda Oromada dalka Itoobiya, ayaa jawaab ka bixiyey hanjaabaddii uu ra’iisul wasaare Abiy Ahmed u jeediyey xisbiyada mucaaradka, xilli la isku hayo doorashada Itoobiya ee dib loo dhigay.
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed, oo u hanjabay dadka diiddan dib u dhigista doorashada, ayaa goor sii horreysay oo shalay ahayd wacad ku maray in cid kasta oo isku dayda inay go’aankaas ka hor-timaaddo laga qaadi doono tallaabo adag.
“Cid kasta oo doorasho aan sharciga waafaqsaneen iney qabato dooneyso, isla-markaana damacsan iney awoodda deegaan xoog ku qabsato dowladda federaalka wixii hadda ka dambeeyo uma dul qaadaneyso, tallaabba kasta inaan qaadanana diyaar ayaan u nahay” ayuu yidhi.
u ololeeyaha Qawmiyadda Oromada iyo guud ahaan Itoobiya Jawar Maxamed oo haddaba isna la hadlay wakaaladda wararka ee AFP ayaa hadalladdii ugu dambeeyey ee Abiy ku qeexay “hanjaabad aamusiin ah iyo hanjabaad cabsi gelin ah.”
Waxa uu sheegay in hanjabaadda Abiy Axmed ay tahay mid aan la aqbali karin, islamrkaana aan waxba soo kordhineyn. “Ma jirto cid tidhi waxaan dooneynaa inaan awoodda ku qabsano si aan dastuuri ahayn. Xaqiiqdii waa isaga [Abiy Axmed] iyo xisbigiisa cidda taas iminka sameyneysaa,” ayuu yidhi Jawar Maxamed.
Hanjabaadda Abiy ayaa timid kadib markii Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray-ga ee TPLF, oo ah xisbiga ugu weyn gobolka Tigray, ay sheegtay in doorashooyinka gobolka Tigray ay ku dhici doonaan waqtigooda, iyaga oo ku gacan saydhay go’aankii dowladda Itoobiya ay ku baajisay doorashooyinka.
TPLF ayaa xisbiga Abiy Axmed ee PP ku eedeeyey inaanay doonayn inay doorasho qabtaan, islamarkaana ay u adeegsanayaan cudurka Coronavirus “cudurdaar ay ku aas-aasaan kali-talis hal nin ah”.